एन आर एन ए जाम्बियाको घोषणा : जाम्बियाका पर्यटक तान्न हरेक वर्ष ‘नेपाल डे’ » नेपाल प्लस
एन आर एन ए जाम्बियाको घोषणा : जाम्बियाका पर्यटक तान्न हरेक वर्ष ‘नेपाल डे’
प्रवाशमा नेपालीको चर्चा हुनासाथ हङकङ, बेलायत, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर वा मलेशियाको याद दिन्छ । कि युरोपका अनेक मुलुकको कि जापानकै । कि नेपाली भनेपछि खाडी मुलुकमा दुख पाएका नेपालीको अनुहार याद आउँछ । कमैलाई थाह छ, अहिले अफ्रिकी महादेशमापनि नेपालीको संख्या बढ्दो छ । हामीले ध्यान नदिएपनि अफ्रिकी मुलुकहरु सम्पन्न बन्दै छन् । अझ त्यो महादेशका थुप्रै देशमा नेपालीहरु स्थापित भएका छन्, ब्यवशायी, विशेषज्ञ, लगानीकर्ता, उध्योगीका रुपमा । सम्पन्न बन्दै गएका अफ्रिकी मुलुकका नागरिक वर्षेनी विश्वका धेरै मुलुक भ्रमण गर्छन् । ति मुलुकमा हाम्रो ध्यान जान सकेकै छैन । अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको उपस्थिति नगण्य छ । तर हालै निर्वाचित एन आर एन जाम्बियाको कार्य समितिले अब जाम्बियाका पर्यटक नेपाल तान्ने, नेपाललाई जाम्बियामा प्रवर्धन गराउने गज्जबको योजना बनाएको छ ।
एन आर एन ए जाम्बियामा हालै अधिवेशन भयो । त्यहाँ अध्यक्ष पदमा डा. विशालनाथ उप्रेती निर्बाचित भए । उनले आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनासाथ प्रत्येक बर्ष ” नेपाल डे” आयोजना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाको गैह्र आवाशिय नेपाली संघको तेस्रो साधारण सभा गत आइतबार लुसाकामा सम्पन्न भएको हो । सभाले डा. बिशालनाथ उप्रेतीको अध्यक्षतामा सन २०१७- २०१९ का लागि नयाँ कार्यसमिती चयन गर्‍यो । जसमा शंकर सुनुवार उपाध्यक्ष, प्रमोद शर्मा महासचिव, मोतीलाल श्रेष्ठ सचिब, भिमबहादुर बम कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा डा. किशोर अधिकारी, पोषणराज बस्नेत, सन्ध्या खनाल,खेम नारायण पौडेल, शोभा सुनुवार र इन्दिरा उप्रेतीलाई चयन गर्‍यो ।
त्यसैगरी सभाले बिदुर खनाल, अङ्गिरा आचार्य, सबिता आचार्य, नर्मदा आचार्य ढकाल, डा. रामजी ढकाल, डा. प्रकाशचन्द्र घिमिरे, रजनी श्रेष्ठ र केशब श्रेष्ठलाई सल्लाहकारमा चुनेको छ । धेरैलाई थाह छैन होला, जाम्बियाकालागि एन आर एन ए नयाँ अध्यक्ष डा. उप्रेती नेपालमा निकै नाम कमाएका भूगोलबिदपनि हुन् ।
सभामा अध्यक्ष बिदुर खनालले एनसिसि जाम्बियाको सन २०१५- २०१७ को प्रगती विवरण प्रस्तुत गरे। कोषाध्यक्ष भिम बहादुर बमले आर्थिक प्रतिबेदन । त्यसलाई सभाले सर्बसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको थियो । त्यसै गरि डा. प्रकाशचन्द्र घिमिरे संयोजक र रजनी श्रेष्ठ, इश्वर भुषाल सदस्य रहेको निर्वाचन समितीले निर्वाचन प्रक्रिया सन्चालन गरेको थियो ।
नयाँ कार्य समिति । नयाँ जोश । एन आर एन ए का केन्द्रिय कोषाध्यक्षको कार्यथलोपनि अफ्रिका । उनको सल्लाह, सुझाव र संलग्नता त हुनेनै भयो । त्यसपछि अफ्रिकी महादेशकालागि क्षेत्रिय संयोजक सुनिक कार्की । सम्पन्न बन्दै गएको अफ्रिकी मुलुकको आर्थिक अवस्था । नेपालमा न्युन उपस्थिति त्यहाँबाट जाने पर्यटकको संख्या । यो सबै हेरेर नयाँ कार्य समितिले ‘नेपाल डे’ मनाउने र अफ्रिकाका पर्यटकलाई नेपाल जान लोभ्याउने निति लिएको हो । ‘नेपाल डे’ मा अब नेपाल संवन्धि बिभिन्न कार्यक्रम गरेर जाम्बियाको एन आर एन ए ले त्यहाँका पर्यटकहरुलाई नेपाल जान हौस्याउने छ । नेपाललाई जाम्बियामा परिचित र प्रवर्धन गर्ने छ । यो निर्णय अध्यक्ष वा क्षेत्रिय संयोजकले मात्रै गरेको नभएर सभालेनै पारिद गरेको हो ।
(फोटो क्रेडिट- हिकमत थापा)
प्रकाशित मिति: August 2, 2017
एन आर एनलाई टक्कर दिन एन आर एन जस्तै अर्को संस्था ? यस्तो छ तयारि
सुस्तमनस्थितिका अफ्रिकी वालवालिकालाई एन आर एन अफ्रिकाद्वारा सहयोग
आप्रवासी कामदारको न्यायिक अवस्था